‘ब्युटी प्याजेण्ट’ जितेपछि बेहोस बनाएर यसरी भएको थियो होटल एभरेष्टमा बलात्कार, पूर्व मिस नेपाल माल्भिका पनि मुछिइन् - samayapost.com
समयपोष्ट २०७९ जेठ ५ गते १६:२४
बुधबार ‘सुसी खान जाने हो’ टिकटक एकाउटबाट एक युवतीले आफु बलात्कारको सिकार भएको जानकारी दिइन् । २/२ मिनेटका २० वटा भिडियोमा उनले कहिले ? कसरी ? बलात्कृत भइन् त्योबारे जानकारी दिएकी छन् । आफू बलात्कृत भएको बारे उनले सन् २००२ कि मिस नेपाल माल्भिका सुब्बालाई समेत जानकारी दिएकी थिइन् । तर, उनले उल्टै भनिदिइछन्, ‘ग्ल्यामर क्षेत्रमा यो त नर्मल हो ।’ २०७१ सालमा आयोजना गरिएको मिस ग्लोबल नामक ब्यूटी प्याजेन्टका क्रममा ति युवतीमाथि बलात्कार भएको थियो । उनले आफूलाई बलात्कार गर्ने र सहयोग गर्नेहरूको थर मात्र खुलाएकी छन् । जसमा एक जना फोटो पत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालक रहेको बताएकी छन् ।
‘तिमी आउ फोटोसूट गरौं, अनि मोडल बनाउँछौं’ । त्यति म्यासेज आएपछि उनी निकै उत्साहित भइन् । त्यसरी म्यासेज पठाउने फोटो पत्रकार थिए।
ति फोटो पत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले तस्बिर खिचे र उनलाई ५ हजार पैसा दिए । फोटो खिचेर उनीहरूले ‘ब्युटी प्याजेन्ट’ आयोजना गर्दै रहेको बताए । म त्योभन्दा अगाडि पनि ब्युटी प्याजेन्टमा भाग लिइसकेकी थिएँ । त्यसले म राजी भएँ । ब्युटी प्याजेन्टको विनर भइसकेपछि उनलाई ‘सक्सेस पार्टी’ दिने भनियो । उनी तयार भइन् ।
एभरेष्ट होटलमा पार्टी आयोजना गरेको भनियो । उनी त्यहाँ गइन् । जब की त्यहाँ कोही पनि थिएनन् । उनले प्रश्न गरिन्, खै त अरू मानिसहरू ?
‘यस्तै हुन्छ, केटीहरूलाई गाह्रो भयो भने रेष्ट गर्नलाई भनेर रूम लिएर राखेको छु, तिमी त्यहाँ गएर एकछिन रेष्ट गर । सबैजना आएपछि म तिमीलाई बोलाउँछु’ । त्यसपछि उनी रूममा गएर रेष्ट गर्न गइन् ।
त्यतिबेला उनी १६ वर्षकी थिइन् । जतिबेला उनको नागरिकता समेत बनेको थिएन् । कोठामा रेष्ट गर्दा बेला-बेला उनलाई होस आइरहेको थियो । जति बेला होसमा आयो त्यतिबेला लाग्यो कोहीले उनका शरिरका अंग चलाइरहेका छन् । उनीमाथि कोही प्रयोग भइरहेको छ ।
त्यति भनिसकेपछि उनको बोली रोकियो । निकै तनावपूर्ण अवस्थामा उनी त्यहाँबाट घरतिर लागिन् । त्यसपछि उनले ब्याकमेलिङ गरेर पटक पटक बलात्कार गरिरह्यो । कति पटक त उनले आत्महत्या गर्नेबारे पनि सोचिन् । तर, सकिनन् ।
एक जना खड्का थरका उनका केटा साथीले उनलाई निकै सहयोग गरे । केटा साथी र उनी एब्युजरको कन्सल्टेन्सीमा गए । त्यहाँका सबै कर्मचारीलाई राखेर, कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र फोटो पत्रकार दुवैलाई त्यहाँ राखे । उनीसँगै विजेता बनेकी अर्की युवती पनि उनीसँगै थिइन् ।